ब्रेटर थाइरोइड ग्रंथिको बढावा हो। गोस्टर: लक्षण, वर्गीकरण, कारणहरू, उपचार
मानव शरीर मा, थाइरोइड ग्रंथि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ। Endocrine प्रणाली सन्दर्भ गर्दै, शरीर ऊर्जा चयापचय को विनियमन मा भाग लिन्छ। यसको दुई भाग एक गर्दनद्वारा जोडिएको छ, ट्रेकिआका पक्षमा। शरीरमा प्रवेश गर्ने ऊर्जा कोशिकाहरूमा विभाजित गरिन्छ, यदि यो पर्याप्त छैन भने, थाइरोइड ग्राउण्डको हार्मोन हस्तक्षेप गर्दछ। यदि घाटा स्थायी छ भने, ऊतकहरूमा एक निश्चित परिवर्तन हुन्छ र एक ब्रेटर विकास गर्दछ। रोग को धेरै रूपहरु र डिग्री हो, जो कारणहरु र लक्षणहरु मा भिन्न हुन्छन्। कुनै प्रकारको रोग विज्ञान को निदान र उपचार आवश्यक छ।
थाइरोइड ग्राउन्डको गोर्खा
थाइरोइड ग्राउण्डमा ट्यूमरको गठनको तंत्र अबसम्म पर्याप्त अध्ययन गरिएको छैन। आज औषधिमा चिनिने उपचारका तरिकाहरू सधैं पर्याप्त प्रभावकारी हुन सक्दैन र पूर्णतया रोगविज्ञानको उपचार गर्न सक्दैनन्।
थाइरोइड ग्रैंड ऊतक फोक्सिको बनाइयो - विश्वव्यापी कक्ष। अर्गिजाइजेसनसँग सम्बन्धित शरीरमा भित्ताहरू विकारहरूको नेतृत्व गर्दछ। थाइरोइड ग्राउण्डको बहुइनडुलर ब्रेकरले व्यक्तिगत क्षेत्रहरूमा परिवर्तन ल्याउँदछ, र फैलिएको छ - सम्पूर्ण ऊतक। फोक्सो बढ्नको साथै, यो रोगले सिस्टिक संरचनाहरू (सिस्टिक-नोडल ब्रेस्टर )को घटनाद्वारा गुणण गर्न सकिन्छ। पथोलोजीको प्रगति घातक व्यक्तिहरुमा नोड्स को घटान गर्न सक्छ।
ब्रेटर एक रोग हो जुन थाइरोइड ग्रंथिमा विभिन्न क्षति समावेश गर्दछ। त्यहाँ थुप्रै प्रकारहरू, ढाँचाहरू र रोगविज्ञानको डिग्री छन्, जुन पाठ्यक्रम, कारणहरू र लक्षणहरूको प्रकृतिमा भिन्न हुन्छन्। विषाक्त ग्लोमिक ब्रेकरको विकासको मुख्य कारण शरीरमा आयोडिनको कमी हो , जसले थाइरोइड ग्रंथिको गुप्त गतिविधिलाई घटाउँछ। खराब पारिस्थितिकीले पनि थाइरोइड ग्रंथिको कार्यलाई असर गर्छ। विषैले पदार्थहरूको एक्सपोजरले endocrine प्रणाली को दबाएर, थाइरोइड ग्रंथि को गतिविधि धीमी हुन सक्छ।
आयोडिन युक्त उत्पादहरू (दूध, फल, माछा) को अपर्याप्त प्रयोग पनि ब्रेटरको कारण हुन सक्छ। नोडल प्रकारको रोगको विकासको कारण थाइरोइड ग्राउन्ड वा एडेनोमाको क्यान्सर प्रक्रिया हो। यस मामला मा कोशिकाओं को भिन्नता र विभाजन को विषैले पदार्थहरु, विकिरण को प्रभाव हो, र प्रकृति मा विरासत हुन सक्छ।
प्रतिवा पथोलोजी प्रतिरक्षा प्रणाली को विशेष एंटीबॉडी को शरीर मा प्रभाव को कारण हुन्छ। उपचारले औषधिहरू समावेश गर्दछ जुन हार्मोनको उत्पादनलाई रोक लगाउँदछ, कहिलेकाहिँ शल्य हस्तक्षेपले समस्या समाधान गर्दछ।
ब्रेकर एक रोग हो जसले प्रारम्भिक चरणहरूमा आफूलाई प्रकट गर्दैन, र धैर्यले यसको उपस्थितिलाई पनि शंका गर्दैन। मात्र थाइरोइड ग्राउन्डमा महत्त्वपूर्ण वृद्धिको सम्बन्धमा एक निश्चित क्लिनिकल चित्र विकसित हुन्छ। थाइरोइड रोगको लक्षण यसको एडमामा द्वारा गर्दन को सामने र आसन्न ऊतकों को संपीडन को विशेषता हो। एकै समयमा, बिरामीहरू सुक्खा खाँटीको उपस्थिति, आवाजको स्वरमापन, "गलामा कोमा" को भावना, सांसको कमी। जब टाउको घुमाउँछ, त्यहाँ तनाव र चक्कीपनको भावना हो, जुन गर्दनको भाँडाको घाउको कारण हो। केहि हद सम्म, एल्कोफैगस को संपीड़न को कारण निगलने मा परेशान छ। विभिन्न नोड्स थाइरोइड ग्रंथिमा देखा पर्दछ। त्यस्ता परिस्थितिहरूमा के गर्न - त्यसैले यो डाक्टरसँग परामर्श गर्न पहिलो संदेहमा छ।
आयोडिन को कमी को कारण रोगविज्ञान को विकास संग, क्लिनिकल चित्र हाइपोथीराइडाइज्म संग सम्बन्धित अन्य लक्षणहरु द्वारा पूरक हुन्छ: पेटून्स, अक्सर सांस लेने वाला रोगहरु, कम रक्तचाप। थाइरोइड एडेनोमा या कब्र रोगको साथ त्यहाँ हाइपरथराइडाइमको लक्षणहरू छन्: वजन घटाने, चिन्ताजनक, हात चिन्ता, भूख, बुखार।
Euthyroid goiter डाइफ्यूज गर्नुहोस्
पाथोलोजी आयोडीन को कमी को परिणामस्वरूप विकसित हुन्छ। थाइरोप्लास्टिक ग्राउण्डमा हाइपरप्लास्टिक र हाइपरट्र्रोफिक प्रक्रियाहरूको लाभांश क्यारेक्टरले पर्याप्त थाइरोइड हार्मोनको साथ शरीर प्रदान गर्न उद्देश्य राख्दछ। आयोडिन को कमी को लागि एडाप्टन तंत्र ईयोजनीन आयोडीन को पुन :करण, गुर्दे द्वारा आयोडाइड को स्राव मा कमी, त्रियोडिथियोरोइन को संश्लेषण, र थाइरोइड ग्रंथि द्वारा बढयो आयोडीन uptake संग पुनर्गठन संग सम्बन्धित हुन्छन्। यस तरिकाले शरीर आयोडिन कमीको क्षतिपूर्ति गर्दछ, तर थाइरोइड सेलहरूको हाइपरट्र्रोफी हो, जसले थाइरोइड प्रकार्यहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्दछ। Euthyroid goiter यसको कोर्स जटिलता जस्तै क्रोलियम, ट्रेस तत्व (molybdenum, तांबे, कोबाल्ट, सेलेनियम, जस्ता, मंगनीज) को कमी, कारखाना, पुरानो संक्रमण, भावनात्मक तनाव, धूम्रपान जस्ता कारकहरूको कारणले जटिल हुन सक्छ।
अधिकतर अवस्थामा, नैदानिक अभिव्यक्तिहरू विकसित गर्दैनन्, यस रोगको कारणले, थाइरोइड ग्रंथिको कार्य व्यावहारिक रूपमा पीडित गर्दैन। कहिलेकाहीँ मरीजको अवस्थामा एक सामान्य कमजोरी, थकान र थकान बढ्न सक्छ। थाइरोइड ग्रंथि को बढाव मुख्यतः एक दृश्य कस्मेटिक दोष संग र गर्दन मा दबाव को एक संवेदना संग हुन्छ। थाइरोइड रोगका अन्य लक्षणहरू अंगको हाइपरट्र्रोमा सम्बद्ध छन्, जो गम्भीर जटिलताहरूको कारण हुन सक्छ: ग्रंथि, हेमोर्रेज, एसिफैगसको सम्पीडन, ट्रेचिआको संक्रमण। यस रोगको पृष्ठभूमिको विपरीत, अन्य, ब्रेटरको अधिक जटिल प्रकारहरू विकास हुन सक्छ।
विषाक्त ब्रेस्टर विच्छेद गर्नुहोस्
मध्यम उमेरका महिलाहरूमा, मुख्य रूपले विषाक्त बगेरमा फैलिएको छ। यो रोगले छोराछोरी र वरिष्ठहरूलाई निकै कम पार्छ। एक सय प्रतिशत स्थापित नभएसम्म, कुन पक्षले रोगको विकासलाई प्रभाव पार्छ, तर चिकित्सा विशेषज्ञहरूले अधिकांश कारण आनुवंशिक दोषलाई मुख्य कारणको रूपमा मानिन्छ, जसको परिणामस्वरूप एंटीबॉडी उत्पादनको विनियमन प्रतिरक्षा प्रणालीमा उल्लङ्घनको व्यवस्था गर्दछ। यी विकारहरूले तथ्यलाई निम्त्याउँछ कि एंटीबॉडी रोगीको आफ्नै थाइरोइडको ऊतकको विरुद्ध उत्पन्न हुन्छ। यस मामलामा जेनेटिक दोषहरू पूर्ण भविष्यवाणी होइन, तर एक सांख्यिकीय नियमितता, यो जरूरी छैन कि बच्चा बिरुद्ध हुनेछ भने ब्रेस्टरको रोग आमाबाबु मध्ये एक मा छ।
यस रोगको लागि मात्रामा थाइरोइड ग्राउन्ड वृद्धि गर्न दुर्लभ हो। 30% रोगीहरू त्यहाँ आंख बढ्छ (कण 'ओथथोल्योपैथी, एन्कोड्रेन्स ओफ्थोलियोपैथी, एक्फोफथामोम)। विषाक्त विषाक्त ब्रेस्टर को लागि मुख्य लक्षणहरू थाइरोइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन को अधिक संग सम्बन्धित छ। रोगीमा हार्मोनल प्रभावको अत्यधिक गतिविधिको कारण, हृदयका कार्यहरू उल्लङ्घन गरिन्छ, arrhythmia को विकास सम्म। चयापचय प्रक्रियाहरु लाई मजबूत गर्न वजन घटाने को लागि नेतृत्व। मरीहरूले संकेतहरू अनुभव गर्न सक्छन् जस्तै नींद, आँसु, र कमजोरी, चिन्ता, बिचारको उपस्थिति बिग्रेको।
नोडुलर ब्रेटर एक सामान्य विशेषता संग पथोलोजीहरूको श्रृंखला हो - थाइरोइड ग्रंथिमा नोडको गठन। रोग विकासको संदेह पछि, बिरामीको प्रकार निर्धारण गर्न को लागी रोगीले परीक्षाको अर्को श्रृंखलालाई गुनासो गर्न आवश्यक छ। यदि एक रोगी एक भन्दा बढी नोड छ भने, थाइरोइड ग्रैंड को बहुइनडोलिक ब्रेटर निदान गरिएको छ। पैथोलोजीको सबैभन्दा सामान्य अभिव्यक्ति कोललोड euthyroid goiter छ। यस प्रकारको लक्षणहरू उत्पन्न भएन, तर गर्दनमा दोषहरू छन्, विरूपण सम्म। पीडित संवेदना संग एक साथ, जटिलता प्रकट हुन्छ, जो संरचनाहरु को एक तीव्र वृद्धि को संकेत गर्दछ: नोड को hemorrage, सूजन को रूप, जबकि थाइरोइड ग्रंथि पनि बढ जान्छ। ठूलो आकारको नोडहरूले ट्रेकिआ वा esophagus निचोल्न सक्दछ, जुन सास फेर्न र निलो पार्ने उल्लङ्घन हो।
जेडिक भविष्यवाणी, क्रोनिक भाइरस र जीवाणु संक्रमण, लागूपदार्थ, खानाको जोबोजेन कारक, पर्यावरणीय कारक जस्ता तत्वहरु द्वारा नोडुलर ब्रेटरको विकासलाई बढावा दिइन्छ। मुख्य कारण शरीरमा आयोडिनको कमी हो। रोगलाई उपेक्षाको अवस्था नदिनुहोस्। यदि तपाईले थाइरोइड ग्रंथिमा दाँत महसुस गर्नुहुन्छ भने डाक्टरलाई तुरुन्तै ठेगाना दिनुहोस्। त्यसपछि के गर्न, कसरी छुटकारा पाउन र जटिलताबाट जोगिन - यो परीक्षाको पूर्ण सेट पछि एक विशेष परामर्शमा जान्न सकिन्छ। यस पछि मात्र, तपाइँ केहि उपायहरू लिन सक्नुहुन्छ र उपचारको वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ।
नोडुलर ब्रेटरको डिग्री निर्धारित गरिएको छ कि कतिपय थाइरोइड ग्राउन्ड बढेको छ। नोड्स विभिन्न आकार र फरक मात्रामा हुन सक्छ। आजको लागि, डिग्रीको सन्दर्भमा नडुलर ब्रेटरको दुई वर्गीकरणहरू छन्। पहिलो निकोलोभको लागि हो। त्यहाँ5समूहहरू छन्। थाइरोइड ग्रंथिको शून्य डिग्रीमा यो देख्न सकिदैन र त्यो खुट्टामा महसुस हुँदैन। पहिलोमा - यो दृश्यात्मक छैन, तर तालिएको छ। दोस्रो डिग्री निगलको समयमा ग्रंथिको दृश्य दृष्टिकरणको विशेषता हो। तेस्रोसँग, गर्दनको आलोचना बढ्छ र मोटो हुन्छ। चौथो तर्फबाट स्पष्ट ब्रेटरको रूपमा प्रकट हुन्छ, जसले गर्दनको कन्फिगरेसन तोड्छ। रोगको पाँचौं, अन्तिम, डिग्री जटिलता संग भरी छ। थाइरोइड ग्राउन्डको विशाल आकार छिमेकी अंगहरूको निचोड गर्न जान्छ, किनकि सांसद, हृदय रोग र जस्टिनन्टाइनलल पथको कार्यहरू अवरुद्ध छन्।
डब्ल्यूएचओ वर्गीकरणको अनुसार, त्यहाँ तीन (शून्य, पहिलो र दोस्रो) रोगको डिग्री हो। त्यहाँ शून्य ब्रेस्टर संग, पहिलो एक देखिने छैन, तर यो तालमेल छ र दोस्रो डिग्रीमा ब्रेकर महसुस हुन्छ, र यो नग्न आँखको साथ हेर्न सकिन्छ। यदि रोगको विकासको प्रारम्भिक चरण शरीरमा देख्न सकिने खतरामा पर्दैन भने रोगको प्रगतिले गम्भीर नतिजा ल्याउन सक्छ, किनभने बियर एक गम्भीर रोग हो, जुन बाह्य परिवर्तनहरूको बावजुद सबै प्रणाली र अङ्गहरूको कामलाई असर गर्छ।
निदान को तरिका
रोगीको प्राथमिक परीक्षाले प्यालापनको मद्दतद्वारा प्रदर्शन गरेको छ। यदि एक नियोपोलस फेला पर्यो भने, अल्ट्रासाउन्डले थाइरोइड भोल्युम र घाँसको सही आकार निर्धारण गर्न प्रदर्शन गरेको छ। एक सुई सुई आशीर्वाद बायोप्सी गरिन्छ जब निर्माण को आकार 1 सेन्टिमिटर भन्दा माथि छ, वा घातक ट्यूमरको संदेह छ। एक बायोप्सी संग संयोजन मा अल्ट्रासाउंड को अनुसन्धान को सूचनात्मक मूल्य बढ्छ।
थाइरोइड ब्रेस्टर, जब निचोड र ठूलो आकारमा राखिएको हुन्छ, साईन्सल ट्र्याकमा परिवर्तन गर्न सक्छ, जसले जटिलता उत्पन्न गर्दछ। यसलाई रोक्न, एक्स-किरणहरू छाती र esophagus बाणुमा विपरित गरेर निर्धारित गरिन्छ। चुम्बकीय अनुगमन इमेजिङ पुन: केन्द्रित ब्रेटरको विस्तृत अध्ययनको उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ। सामान्य अवस्थामा, यो निर्धारित छैन।
ब्रेटर कसरी गर्ने?
ब्रेटरको उपचार रूढ़िवादी र परिचालक हुन सक्छ। पहिलो विकल्प प्रयोग गरिन्छ यदि थाइरोइड ग्राउन्डको विघटन, नोडुलर, बहुइनडल ब्रेटर को निदान गरिएको थियो। सर्जरीको निरपेक्ष गर्भनिरोधक पनि रूढ़िवादी उपचारको कारण हो। यसमा धेरै चरणहरू छन्। पहिलो, तपाईंलाई आफ्नो आहार पुनरुत्थान गर्न र यसलाई सन्तुलित आहारसँग बदल्न आवश्यक छ। अझै स्वच्छता र स्वच्छताको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक छ। उनीहरूले एक विशेष रिसोर्टमा उपचार गर्न सक्छन्। रूढ़िवादी उपचारको महत्त्वपूर्ण घटकहरू: जिगर र आंतन कार्यहरूको सामान्यकरण, पुरानो संक्रमणको फेसोसाइटिकेशनको स्वच्छता, शरीरमा आयोडिन चयापचयको सामान्यकरण। उत्तीर्ण यस्तो औषधी लिएर प्राप्त भएको छ: "ट्राइयोडोथिरोनिन", "थ्येरोइडिन", "थ्योटोम", "थिइरोकोम्बे"।
यदि शल्यक्रियाका लागि संकेतहरू छन् भने सञ्चालनत्मक उपचार निर्दिष्ट गरिएको छ: IV र V डिग्रीको ब्रेस्टर बिग्रियो, ग्रेड III को ब्रेस्टरमा फैलिएको छ, जसले आफैलाई रूढिवादी थेरेपी, मिश्रित र नोडुलर ब्रेटरलाई उल्टाउन सक्दैन, यदि थाइरोइड ग्राउन्ड बढ्यो। ब्रेटर दुई तरिकामा हटाइएको छ: hemistrumectomy र आंशिक अवधारणा। अपरेन्टिभ हस्तक्षेप सर्जन द्वारा endocrinologist को नजदीक को निगरानी द्वारा आयोजित गरिन्छ। लोक उपचारको साथ ब्रेटरको उपचार गर्न पनि सम्भव छ। सबैभन्दा परीक्षण र प्रभावकारी तरिका घास elecampane को प्रयोग हो। वोदका एक इन्फ्यूजन बाट तयार हुन्छ र पूर्ण उपचार सम्म गले कुल्ला गर्न प्रयोग गरिन्छ।
क्रमशः ब्रेटरको रोगमा चल्न नदिने, तपाईंलाई यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि यस रोगले बिरुद्ध विकास गर्न सक्दैन। यो रोकथामको बारे हो, जुन यस अवस्थामा सामूहिक, समूह, व्यक्तिगत हुन सक्छ। मासमा आयोडाइजम नुनको प्रयोगमा सामेल हुन्छ, जुन प्रति हेक्टर 25 ग्राम पोटेशियम हुन्छ। यो विधि आई आयोडीन को कमी को वृद्धि को जोखिम मा विशेष रूप देखि महत्वपूर्ण छ। समूह प्रोफाइलक्सिस "Antistrumin" लागू औषधिको साथमा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रति हप्ता 1 ट्याब्लेटको खुट्टामा सेना एकाइ, बालबालिका र विद्यालय समूहहरूमा प्रयोग गर्नुहोस्। जो आयोडिन को कमी संग क्षेत्र मा पहुंचे रोगहरु लाई पनि एंटिस्टम निर्धारित गरिन्छ।
धेरै स्वच्छता र सामाजिक उपायहरू (आंतों संक्रमण, आबादी को सेनेटरी संस्कृति, हाइपोभिटिनोसिस को रोकथाम, संतुलित पोषण, जीवन सम्बन्धी परिस्थितियों को सुधार) को सहायता संग विशिष्ट प्रोफिलैक्सिस को साथ संयोजन को लागी संयोजन गर्न सकिन्छ।
अनुहारमा प्रोसेसर क्यान्सर: उपचारको कारणहरू र तरिकाहरू
आँखा वरिपरि येलोनेसिस: कारणहरू र उपचार
घरमा हेलिकप्टरहरू र उनीहरूको घटनाका कारणका कारणका कर्तव्यहरू
हड्डी को कोने मा दरारहरु को उपचार र उपचार
हड्डियों को भंग
कसरी छोटो किनाराहरू संग बोल्ट अचयन गर्न केही सिफारिसहरू
राज्य अल्जेरिया: जनसंख्या, इतिहास, वर्णन
केही सुझावहरु: जब भियतनाम मा आराम गर्न यो सबै भन्दा राम्रो छ
"लिन वा भुक्तानी" को सिद्धान्त: सार, आज लागू इतिहास
औषध "Sealeks" वा "Alikaps"? लागूऔषधको लाभ
आफ्नै हातमा फूल लागि बक्स कसरी बनाउने?
HTML पुन: निर्देशन: आगन्तुक व्यवस्थापन